7 tsara indrindra te-hianatra any ivelany ho an'ny vatsim-pianarana 2021/2022 Portal: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
7 tsara indrindra te-hianatra any ivelany ho an'ny vatsim-pianarana 2021/2022 maimaim-poana
Te hianatra any ivelany aho amin'ny vatsim-pianarana maimaim-poana: ny fianarana any ivelany dia nofinofin'ny mpianatra maro. Na izany aza, ny vidin'ny saram-pianarana dia matetika no mihevitra an'io nofy io. Ahoana anefa raha milaza aminao fa misy fomba?
Ary, ahoana raha milaza aminao fa mbola misy fanantenana ny hianatra maimaimpoana any ivelany, dia hino ve ianao? Avelao aho hamaky azy aminao. Mbola afaka mianatra any ivelany ianao ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Ary azo atao izany amin'ny alàlan'ny vatsim-pianarana.
In ity lahatsoratra ity, ianao momba ny sasany amin'ireo vatsim-pianarana izay afaka manampy ny fianaranao any ivelany. Na izany aza, ny sisa hataonao dia ny mihaona ny éligibilité. Ireto manaraka ireto dia sasany amin'ireo top tiako hianarako maimaimpoana any ivelany vatsim-pianarana:
1. Fellowship Hubert Humphrey any Etazonia ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena
Ity vatsim-pianarana ity dia natao ho an'ny matihanina efa za-draharaha. Ary koa, ho an'ireo liana amin'ny fanamafisana ny fahaizany mitarika amin'ny alàlan'ny fifanakalozana fahalalana sy fahatakarana momba ireo olana iraisan'ny besinimaro any Etazonia sy ny Firenenan'ireo Fellows.
Na izany aza, napetraka ao amin'ny iray amin'ireo anjerimanontolo amerikana mandray anjara ny Fellows. Koa, Fellows tsy afaka misafidy izay oniversite hanatrika azy ireo. Fa kosa, tendrena amin'ny vondrona maro samy hafa 7-15 ho an'ny andrim-panjakana fampiantranoana sahaza indrindra izy ireo. Saingy miankina amin'ny faritra mahaliana sy matihanina azy ireo izany.
Ho fanampin'izay, mariho. Ny vondrona kendrena dia ny olom-pirenena manana firenena mendrika any Afrika atsimon'i Sahara. Ary koa, ireo any Eropa sy Eurasia. Ary ireo an'ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra. Ary koa Azia Atsinanana sy Pasifika. Ankoatr'izay, Azia atsimo sy afovoany, ary hemisphere andrefana.
Award vola: Tsidiho ny rohy fampiharana amin'ity fampahalalana ity.
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy manana undergraduate (anjerimanontolo voalohany) diplaoma. Ary koa, dia tsy maintsy manana traikefa mandritra ny dimy taona farafahakeliny. Ary tsy maintsy manana traikefa voafetra na tsy nisy teo aloha tany Etazonia Ankoatr'izay, tsy maintsy naneho toetra mitarika, ary tsy maintsy manana firaketana ny asam-panjakana amin'ny fiarahamonina. Ary koa, tsy maintsy manana fahaizana miteny anglisy.
Fe-potoana: Alohan'ny 1 Oktobra isan-taona.
Awards available: Roa Roa (200).
2. Fankalazana ho an'ny masoivoho iraisam-pirenena ao amin'ny University of West London
Io no iray amin'ny tsara indrindra aho te hianatra any ivelany hahazoana vatsim-pianarana maimaim-poana. Ary manaiky sy manome fanohanana ara-bola ho an'ireo mpianatra miavaka. Ankoatr'izay, natao ho an'ireo izay maniry ny hanao masoivoho ho an'ny University of West London.
Ankoatr'izay, ilaina ny mahafantatra fa nomen'ny University of West London, UK izy. Ary manarona ny fampianarana ambaratonga voalohany na diplaoman'ny mpianatra amin'ny oniversite West London. Ary koa, ny vondrona kendrena amin'ity vatsim-pianarana ity dia ny tsy EU Mpianatra iraisam-pirenena.
Award vola: £ 5,000.
fepetra: Ireo mpangataka dia tsy maintsy efa nangataka fandaharam-pianarana amin'ity oniversite ity. Ary tsy maintsy efa nahazo tolotra ofisialy tamin'ny iray amin'ireo tompon'andraikitra nampidirina anay. Ary koa, tsy maintsy aseho ny hafanam-po sy ny fahaizana ho tonga ambasadaorin'ny mpianatra iraisam-pirenena tsara.
Fe-potoana: 30 martsa / 1 jolay isan-taona.
Awards available: Zato (100).
3. Tongasoa Fellowship Training International
Ity mpiara-miasa ity dia manolotra ny firenena any amin'ny firenena ambany sy ambany ny fidiram-bola hahazo fiofanana postgraduate na fikarohana postdoctoral amin'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny firenena ambany sy antonony (hafa noho India sy Shina). Ary koa, io no iray amin'ireo tsara indrindra tiako hianarana any ivelany hahazoana vatsim-pianarana maimaim-poana.
Na izany aza, tsy maintsy mifototra amin'ny fikambanana mpampiantrano mendrika amin'ny firenena manana fidiram-bola ambany na antonony ho an'ny tetikasa fikarohana ianao. Izay mety ho fikambanana misy anao ankehitriny na iray hafa.
Ary koa, ny fikambanan'ny mpampiantrano anao dia tokony hanaiky hanome ny habaka sy ny loharano ilainao. Ary izany dia manomboka amin'ny daty fanombohana ka hatramin'ny datin'ny fiafaran'ny loka anao. Na izany aza, azonao atao ny manao ny fampiofanana anao amin'ny foibem-pahalalana tsara isam-paritra na iraisam-pirenena. Na izany aza, mahazo antsipiriany bebe kokoa ianao amin'ny rohy fampiharana etsy ambany.
Award vola: 150,000 ka hatramin'ny 300,000 £.
fepetra: Ireo mpangataka amin'ny fiofanana ho an'ny mpianatra dia tsy maintsy manana, na efa ho vita, ny mari-pahaizana bakalorea ary te-hanohy hanao Masters na PhD. Ary koa, ireo mpangataka amin'ny fikarohana postdoctoral dia tokony ho mpikaroka manana PhD na mitovy aminy. Ary koa, ny fikarohana naroso dia tsy maintsy miompana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fahasalamana amin'ny firenena ambany na antonony.
Fe-potoana: Ny fe-potoana farany amin'ny fihodinana faha-2 dia ny 30 aprily 2021 (fangatahana savaranonando). Raha ny fe-potoana farany fangatahana feno dia ny 9 Jolay 2021.
Awards available: Tsy voasoritra.
4. Vatsim-pianarana momba ny fahasalamana maha-olona ao amin'ny Johns Hopkins University
Vatsim-pianarana fahasalamana roa lahy ho an'ny mpianatra avy amin'ny firenena ambany sy antonony. Ary ireo vatsim-pianarana ireo dia natao ho an'ireo izay maniry ny hisoratra anarana amin'ny Master of Applied Science (MAS) an-tserasera amin'ny fandaharam-pahasalamana momba ny mahaolona ao amin'ny John Hopkins University.
Azafady, mariho. Ireo mpianatra MAS voasoratra anarana rehetra dia hahazo ny vatsim-pianarana OPAL (Fandaharana an-tserasera amin'ny fianarana ianarana). Ary ity vatsim-pianarana ity dia sandam-bola indram-bola. Hampiharina amin'ny fampianarana ilaina rehetra mandritra ny fandaharam-pianarana.
Award vola: 10,000 $ US.
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy olom-pirenena sy mponina amin'ny firenena ambany na antonony. Ary koa, tsy maintsy mipetraka mandritra ny fotoana fohy any amin'ny firenena be vola. Ankoatr'izay, izay mahay miteny tsara, mamaky ary mahatakatra ny teny anglisy ihany no afaka. Ary koa, ny mpangataka dia tsy maintsy manana mari-pahaizana licence farafaharatsiny, miaraka amin'ny rakitsoratry ny fahombiazan'ny akademika mahomby.
Fe-potoana: 15 Mey isan-taona.
Awards available: Roa (2).
5. vatsim-pianarana MSc momba ny fandraharahana sy fanavaozana ao amin'ny University of Exeter
Averina indray, ity dia iray amin'ireo tsara indrindra tiako hianarako any ivelany hahazoana vatsim-pianarana maimaim-poana. Ary ho an'ireo izay notolorana toerana ao amin'ny programa MSc Entreprisinance and Innovation Management. Ity dia ao amin'ny University of Exeter amin'ny fidirana amin'ny septambra 2020.
Ary vatsim-pianarana roa feno ihany koa no azon'ny mpianatra. Ireo dia homena mpianatra 1 Iraisam-pirenena. Ary mpianatra 1 avy any UK na Vondrona eropeana.
Ankoatr'izay, ny vatsim-pianarana dia natao ho an'ireo mpandraharaha vao misondrotra izay nangataka sy nomena toerana amin'ny programa MSc Entreprisinance and Innovation Management.
Award vola: Fandraisana loka feno iraisam-pirenena. Ary loka iray feno Fandraisana / UE UE feno, mandritra ny 1 taona.
fepetra: Ireo mpangataka dia tsy maintsy mpandraharaha vao manomboka. Ary koa, tsy maintsy mitazona diplaoma 2: 2 na ambony amin'ny orinasa na lohahevitra mifandraika amin'izany. Ary ny vatsim-pianarana dia mitaky anao hanana ambaratonga anglisy amin'ny IELTS 7.0. Tsy misy fizarana latsaky ny 6.0, na mitovy aminy, raha avy amin'ny firenena tsy Anglophone.
Fe-potoana: 30 aprily isan-taona.
6. Fianarana momba ny fandriam-pahalemana sy ny vatsim-pianarana ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena ao amin'ny University of Bradford
Ny University of Bradford dia manolotra vatsim-pianarana momba ny fandriam-pahalemana 2 sy ny fampandrosoana iraisam-pirenena (PSID). Ary natao ho an'ny mpangataka iraisam-pirenena izy ireo. Ary ireo dia natao ho an'ireo izay kilasy ho mpianatra any an-trano (mazàna ireo avy any UK sy EU).
Ary koa, ny vatsim-pianarana dia ho an'ny fandaharam-pianarana Master fampianarana manontolo andro ao amin'ny fizarana Fandriampahalemana sy ny fizarana Iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana. Ary ho an'ny mpianatra ho avy fotsiny.
Award vola: Ny mpianatra iraisam-pirenena rehetra dia homena vatsim-pianarana £ 5000 ho fihenan'ny saram. Raha ny mpianatra an-trano rehetra dia homena vatsim-pianarana £ 2000 ho fihenan'ny saram.
fepetra: Ny mpianatra rehetra izay notolorana toerana amin'ny iray amin'ireo taranja mahafeno fepetra dia hojerena amin'ny vatsim-pianarana.
Fe-potoana: Tsy voasoritra.
7. Vatsim-pianarana Erasmus University Holland
Averina indray, ity dia iray amin'ireo tsara indrindra tiako hianarako any ivelany hahazoana vatsim-pianarana maimaim-poana. Ary ity vatsim-pianarana ity dia vatsian'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny kolontsaina ary ny siansa ary ny oniversite Erasmus Rotterdam.
Ankoatr'izay, ny vatsim-pianarana dia natao ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena avy any ivelan'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA). Ary izany dia ho an'ireo izay te-hanao ny mari-pahaizana licence na Masters any Hollande.
Ankoatr'izay, mandrakotra ny mari-pahaizana bakalorea sy bakalorea amin'ny lohahevitra rehetra sy ny mpampianatra rehetra. Na izany aza, afa-tsy ny fianarana ao amin'ny International Institute of Social Studies (ISS). Ary ho an'ny Erasmus School of Philosophy (ESPhil). Aza hadino fa. Mpianatra an'ny Master mpikaroka momba ny filôzôfia sy toekarena ihany no afaka.
Award vola: 5,000 €, 10,000 na € 15,000 (hotapahin'ny mpampianatra).
fepetra: Ny mpangataka dia tokony ho teratany tsy EEA izay tsy maintsy mandoa ny saram-pianarany. Ary koa, tokony ho mpianatra mahay mifanaraka amin'ny fenitry ny mpampianatra tsirairay. Ary tsy maintsy mangataka licence na master manontolo andro ao amin'ny Erasmus University Rotterdam. Ary koa, dia tokony ho Mpianatra tsy nahazo diplaoma tao amin'ny toeram-pampianarana iray tany Netherlands.
Fe-potoana: 1 Feb / 1 Mey 2021.
Awards available: Tsy voasoritra
Ireto voalaza etsy ambony ireto ny sasany amin'ireo top tiako hianarana any ivelany hahazoana vatsim-pianarana maimaim-poana. Na izany aza, alohan'ny hampiharana dia alao antoka fa mifanaraka aminao ilay nofidianao. Mirary anao ho tsara vintana.
Fanapahan-kevitry ny mpiasan'ny asa ao amin'ny Initiative Empowerment Rover Women and Rural Initiative
Fandrefesana ny fahantrana marobe ao Nizeria: porofo avy amin'ny fanadihadiana momba ny demografika sy ny fahasalamana
Fifaninanana momba ny fiantohana marika mariky ny marika 2020 | Fampiharana sy fitakiana fampiharana
Modely nohatsaraina ho an'ny fanadihadiana ny mari-pahaizana momba ny zava-bita lehibe momba ny drafitra fitaterana isa ho an'ny mpanjifa Gsm any Nizeria
Torolàlana momba ny fidirana an-tsekoly ho an'ny oniversite any Oxford - 2020/2021.
Nizeriana Navy DSSC Mazava ho azy 28 Fandraisana mpiasa 2021 www.joinnigeriannavy.com
Fifamatorana am-pirahalahiana ao amin'ny toeram-piasana sy fahombiazan'ny fitantanana ao amin'ny oniversite nizeriana voafantina
« 17 Fanolorana vatsim-pianarana injeniera feno famatsiam-bola 2021/2022 vaovao farany
Haryana vatsim-pianarana 2021/2022 Application Portal haryana.gov.in »